Ungaba kanjani omunye wabathengisi abaphezulu e-Amazon?
Mhlawumbe ayikho ingxoxo yokuthi ingaba kanjani omunye wabathengisi abaphezulu e-Amazon kuyoba nengqondo ngaphandle kwengxenye ebaluleke kakhulu empumelelo ye-ecommerce eyaziwa ngokuthi i-automation. Ngezansi ngizogijima masinyane ngezindlela ezintathu ezinamandla zokuzenzekelayo ku-Amazon - ngokucwaninga kwegama elingukhiye lomkhiqizo kanye nokwehliswa komkhiqizo okudingeka uzibonele ohlwini phakathi kwabadayisi abaphezulu be-Amazon.
Igama elingukhiye Usesho
Umbuzo mayelana namagama angukhiye afanele nokuthi ungayithola kanjani mhlawumbe okukhulunywe ngaso sonke isikhathi kubathengisi bamakhasimende e-Amazon, kusanda kudluliselwa ku-SEO yangempela yokuseshwa kwe-Google. Futhi ucabangela ukuthi ayikho ithuluzi lokusesha elingukhiye elingukhiye e-Amazon, impendulo emfushane ukuthi ungayenza ngesandla ngamaphuzu alandelayo:
Sebenzisa i-Google Keyword Planner ukukhomba igama elingukhiye eliyisisekelo eliyisisekelo.
Beka leli gama eliyisihluthulelo emgqeni wosesho lomkhiqizo ku-Amazon - buy watches online replica.
Bona iziphakamiso zokusesha ukubheja isithombe esikhulu sesimo sakho ngasinye.
Njengoba kungenzeka usuqedile, ukuwenza ngesandla kungaba umsebenzi omkhulu kakhulu, ngisho negama elilodwa elingukhiye noma ibinzana elide elisetshenziselwa abathengisi abaphezulu e-Amazon. Ngakho-ke, yini engenziwa ngakho? Uma ucabanga ngokuzenzakalelayo, ngingakwazi ukuncoma ukusebenzisa elinye lamathuluzi okucwaninga angukhiye alandelayo endleleni eya ekubeni ngumthengisi ophumelelayo lapho:
I-KTD Amazon Keyword Tool - iyithuluzi lamahhala kungakusiza ngisho neziphakamiso zokusesha zegama eliyisihluthulelo eside. Isebenza ngokumane ngokukunikeza imibuzo ngokukhawulwa ngokuzenzakalelayo ebhokisini lokusesha le-Amazon kuwo onke amagama angukhiye ahlobene nomkhiqizo oyifunayo.
Amagama angukhiye angu-22 angama-Merchant - enye enye i-premium ukuze ikusize ucwaningo lwegama elingukhiye ku-Amazon. Into yukuthi leli thuluzi lidonsa yonke idatha ndawonye hhayi kuphela ku-Amazon ngokwayo, kodwa isebenzisa uhlelo oluphinde ludonse idatha kusuka ezinjini ezinkulu (njenge-Google ngokwayo, kanye ne-Yahoo ne-Bing). Ngaleyo ndlela, Amagama angukhiye e-Merchant asebenzisa i-algorithm ukuhlanganisa imibuzo efunayo e-Amazon futhi ikunikeze ukulinganiswa komgwaqo okunokwenzeka kakhulu.
Ngikholelwa ukuthi bonke abaphumelele ukunqoba iBhokisi lokuthenga e-Amazon okungenani izikhathi ezimbalwa sebeqale ukugijima le nkinga. Ngisho ukuthi noma yikuphi umncintiswano oseduze angasebenzisa ngaso sonke isikhathi amaqhinga afanayo ukuze akwazi ukukhipha uhlu lwakho lokukhangisa futhi abonakale phakathi kwabadayisi abaphezulu abaphezulu ku-Amazon Thenga Ibhokisi - nje ukukucindezela ngemali encane ukuze uthole izibalo ngaphambi kwakho. Futhi nansi lapho amathuluzi okuhlenga imikhiqizo aqala ukudlala. Mina ngokwami ​​ngincoma ukuzama i-Repricer Express ngaphambi kwanoma yini enye. Leli thuluzi linesibonakaliso esilula kakhulu, sibe phakathi kwama-repricers amaningi aphendulayo futhi amakhulu kakhulu atholakalayo emakethe okwamanje. Isebenza kanjani? Beka kalula, leli thuluzi kuFANELE-unalo uma unezinhlu eziningi zomkhiqizo noma imikhiqizo eminingi enikezwa ukudayiswa ku-Amazon. Eqinisweni, ayikho enye indlela yokuhlala phezu komncintiswano wangempela we-cutthroat e-Amazon ngaphandle kwesofthiwe esenza kahle kakhulu. Okungaphezulu - lesi sixazululo selokhu siphakathi kweziphakamiso zami ezinhle kakhulu, ikakhulukazi ngoba inenani lenyanga ngalinye, ngaphandle kwamacala aphikisayo asekelwe ekuthumeni.